JAALIYADAHA SOOMAALIYEED EE WAQOOYIGA AMEERIKA OO CASHO SHARAF U FIDIYEY GUDDOOMIYAHA CUSUB EE ISKU XIRKA BEELAHA MUDULOOD.
Markii in muddo ah laga fekerayey sidii laysugu xiri lahaa Ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan beelaha Mudulood ee ku dhaqan meelo fara badan oo dunida ka mid ah. Waxa la go’aamiyey in la sameeyo guddoon guud iyo guddiyo yar-yar oo ayagu markaa fuliya wixii hawlo ah ee loo baahdo. Sidaa awgeed, waxa goor dhow la magacaabey, lana doortey Xog-haye guud, oo ah Dr. Cumar Shiikh Cali Xaafuun. Waxa markaana guddiga wuxuu leeyahay Guddoomiye guud, Xoghaye, laba guddoomiye ku xigeeno iyo afhayeen.
Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika aad bey arintaa usoo dhoweeyeen, waxana ay soo qaban-qaabiyeen Casho-sharaf aan caadi ahayn. Casho-sharafkaan, waxa la qabtey 13ka Bisha Abriil. Waxa xafladan qiimaha badan lagu qabtey magaalada seddexaad (Roojester) ee ugu weyn Gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxa xafladan quruxda badan ka soo qaybgalay Soomaali u kala dhalatay beelo fara badan oo kala duwan waxaana ka mid ahaa; Culumaa’udiin. Salaaddiin, Aqoonyahano, Dhalinyaro, Siyaasiyiin iyo Odayaal wax garad ah. Waxa kale oo ka soo qaybgalay dad aad iyo aad caan uga ah Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika, iyo Fanaaniin fara badan.
Bilowgii xafladdaas, waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey Mudane Dr. Cabdicasiis Maaxaay, oo mar aan fogayn dalka keenay gabadh uu afka uga soo bixi jirey buro aad u weyn oo ka tami Soomaaliya. Dr. Maaxaay waxa kale oo uu waddanka keenay gabadh ay kufsadeen seddex nin iyada oo jirta lix sano oo kaliya. Dadkii casho-sharafkaas soo qaban-qaabiyey waxa ay sidoo kale shahaado guddoonsiiyeen xafiiska xildhibaan Norm Coleman, waxana shahaadadaas u guddoomey wakiilka xildhibaanka Mudane Maxamuud Wardheere. Ugu dambeyntiina waxa shahaadooyin khaas ah la guddoonsiiyey Soomaalida ka qaybqaadatey samafalkii Mashruucii Dr Cabdicasiis Maaxaay, waxaana ka mid ahayd fanaanadii caanka ahayd ee Cadar Kaahin.
Xafladaan, waxaa sii qurxiyey khudbo ay jeedisay hooyo wadaniyad ah isla markaana ah aqoon yahan, oo magaceeda la yiraahdo Marwo Madiina Axmed Maxamuud Cadde (Qoorweyne), oo iyada xusuusiyey qof kasta dalkeenii wacnaa, iyada oo si khaas ah uga codsatay ragga Soomaaliyeed ee islaynaya in ay si khaas ah ugu turaan dumarka, waayeelka iyo caruurta. Waxa ay fariinteedaas ay ku gudbisey suugaan aan weli horey u maqal, oo isugu dhafan; gabay sugan oo laxan leh, shirib aan la dhamaystirayn, geeraar aan weli geedkiisa gaarin iyo buraanbur aan dhawaaq fog iyo goosi midna aan lahayn.
Xafladdaas waxa ka hadlay Guddoomiyaha isku xirka Mudulood Dr. Cumar Shiikh Cali, wuxuuna ku dhiiro geliyey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee goob joogga ahayd, in laysku duubnaado, oo laga wada shaqeeyo midnimo, oo lays caawiyo meel walba oo la joogo. Wuxuu u sheegay martida sharafta leh, in deegaanada Mudulood weligood lagu yiqiiney wadaniyad iyo Soomaali jecel, haddana ay iridaha u furan yihiin qofkasta oo ka talinaya wanaaga. Waxa uu ku cel-celiyey in gogoshii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ay weli fidsantahay, iyo in uu Muduloodna go’aansaday sidii lagu yiqiinayba in uu horseed u noqdo dib usoo nooleynta qarankii burburey.